10/04/12 ~ Myanmar Forward
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် အက်စတိုးနီးယား သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြား သံတမန်အဆက်အသွယ်ထူထောင်
Posted by drmyochit Thursday, October 04, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
1Gbps အမြန်နှုန်းနဲ့ ဒေတာပို့လွှတ်နိုင်မည့် လေဆာရောင်ခြည်အသုံးပြု ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုစနစ်
Posted by drmyochit Thursday, October 04, 2012, under သတင်းများ | No comments
တရုတ်(တိုင်ပေ)နိုင်ငံ၊ တိုင်ပေအမျိုးသား နည်းပညာတက္ကသိုလ်က ပညာရှင်တွေဟာ လေဆာရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုထားတဲ့ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတစ်ခုကို စမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ယခုစမ်းသပ်မှုမှာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ လေဆာကိရိယာတွေအစား AAA ဓာတ်ခဲ့အသုံးပြုရတဲံ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးလက်ကိုင်လေဆာပွိုင့်တာကို အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အနီရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင်ကို အသီးသီးအသုံးပြုတဲ့ လေဆာပွိုင့်တာ နှစ်ခုကို အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လေဆာပွိုင့်တာတစ်ခုဆီမှာ 500 Mbps ဒေတာ ပို့လွှတ်နှုန်းရှိတဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းဆီ ချိတ်ဆက်ပြီး Receiver ဆီကို ချိန်ပြီး ဒေတာပို့လွှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Receiver က လေဆာပွိုင့်တာနှစ်ခုက အချက်အလက်တွေကို စုပေါင်းပြီး 1Gbps အမြန်နှုန်းရှိတဲ့ ဒေတာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် ပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Receiver နဲ့ လေဆာပွိုင့်တာတွေအားလုံးရဲ့ ကုန်ကျစရိတ် ဒေါ်လာ ၆၀၀ ခန့်သာရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လေဆာရောင်ခြည်သုံး ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုကို ၂၅ မီတာအကွာအဝေးအထိ အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခြား ကြိုးမဲ့ကွန်ရက် ဆက်သွယ်မှုနည်းပညာတွေထက် ပိုမိုမြန်ဆန်တဲံအပြင် အမှားအယွင်းဖြစ်နိုင်ချေလည်း ပိုမိုနည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေဆာပွိုင့်တာနဲ့ Receiver ကို မျက်နှာပြင်တတန်းတည်းထားရှိဖို့တော့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Blink Hacker Group မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ၀က်ဘ်ဆိုင် ၂၀၀ ကို Hack လုပ်ထား
မြန်မာနိုင်ငံ၏ Haker Group တစ်ခုဖြစ်သော Blink Hacker Group မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၀က်ဘ်ဆိုင် ၂၀၀ ကျော်ကို Hack လုပ်ထားကြောင်း Blink Hacker Group ၏ ၀က်ဘ်ဆိုင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ Blink Hacker Group မှ Hack လုပ်ထားသော ၀က်ဘ်ဆိုက် ၂၀၀ ကျော်တွင် နာမည်ကြီး Site များဖြစ်သော www.shwefm.com နှင့် www.yantarpon.com ကဲ့သို့သော နာမည်ကြီး ၀က်ဘ်ဆိုက်များ ပါဝင်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ တွင် နာမည်ကြီး Site တစ်ခုဖြစ်သည့် www.skynetdth-mps.com ကဲ့သို့သော ၀က်ဘ်ဆိုက်များကို Hack လုပ်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းတို့၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
From : Islam Virus
မူဆလင်တွေရဲ့ ဗလီတိုင်းဟာ အစ္စလာမ်အယူဝါဒကို ခေါင်းထဲရိုက်ထည့်သွင်းရာနေရာ၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေ မွေး ထုတ် ပေးတဲ့ နေရာတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဗလီဆိုတာ မူဆလင်တွေ အလ္လာဟ်အော်ရုံ သက်သက် မက်ကာကျောက်တုံးကို ကန်တော့ပူဇော်ရုံသက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။ဗလီမှာ သောကြာနေ့တိုင်း မူဆလင်တွေဆုံတွေ့တယ်။ ရန်သူ ဘာ သာခြား နိုင်ငံ၊ ရန်သူဘာသာခြားလူမျိုးတွေရဲ့ အခြေအနေတွေ တိုင်ပင်တယ်၊ ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမဲ့ လမ်းစဉ်တွေ ချမှတ် မယ်။ မူဆလင် တွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကို စိုးမိုးရမယ်ဆိုတဲ့ အစ္စလာမ်အယူဝါဒတွေ ရိုက်ထည့်မယ်။ ရန်သူဘာ သာခြားတွေကို ချေမှုန်းပစ်ဖို့၊ လိုအပ်ရင် ဗုံးခွဲနည်းသင်တန်းက အစ ဗလီမှာ ပေးမယ်။ဗလီဆိုတာ အရှင်းဆုံးပြောရရင် ရန်သူဘာ သာခြားနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ဖို့ အတွက် မူဆလင်တွေရဲ့ အခြေစိုက် အမာခံ စခန်း Command Center ပါပဲ။ဘယ်မြို့မှာ ဗလီ ဘယ်နှစ်လုံးဆောက်ပြီးပြီ။
Posted by drmyochit Thursday, October 04, 2012, under သတင်းများ | 1 comment
ဒီပုံကို မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန် ရင်ထဲမှာ တော်တော်ထိခိုက်သွားတယ် ...ကြက်သီး တောင် ထမိပါ တယ် ... ပုထုဇဉ်မို့ ဒေါသလည်း အရမ်းထွက်မိပါတယ် ... နောက်တော့ အဲ့ပုံထဲက အမျိုးသမီးကို တော် တော်သ နားသွားတယ် ... ( သြော် ... သူကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာက အဆုံးအမ မရှိရှာဘူးကိုးးးးးး )ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေ ဒီလို အောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးပါဘူး ... မယုံကြည်ရင်နေမယ် မကိုးကွယ်ရင်နေမယ် သူများဘာသာကို ဘယ်တော့မှ ဒီလို မစော်ကားပါဘူး ... ဘယ်လောက်ပဲ ဒေါသထွက်ထွက် သူတို့ရိုင်းသလို ပြန်ရိုင်းစရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူး ..ဒါပေမယ့် ခွင့်လွှတ်စရာအကြောင်းလည်း လုံးဝ မရှိဘူးလေ ... ဒါမျိုးက မေတ္တာထားပြီး သဘောကောင်းနေရမယ့်အရာမှ မဟုတ်တာ ... အခု လည်း ဒင်းတို့က မြန်မာနိုင်ငံမှာ OIC ဆိုလား?? ဘာဆိုလား?? ရုံးလာဖွင့်ဦးမတဲ့!! အဲ့ဒါကိုရော ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေက သဘောတွေ ဇွတ်ကောင်းပြီး လက်ခံကြဦးမလို့လား၊?
From :Face book
နေမင်းတွင်လျှပ်စစ်မုန်းတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ပြီး လျှပ်စစ်အပူလှိုင်းများ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျရောက်နိုင်ကြောင်း ယနေ့ထွက် ပေါ်နေသော သတင်းကို နာဆာတွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း မိုးလေ၀သနှင့်ဇလဗေဒ ကျွမ်းကျင်သူ ဦးထွန်းလွင် ကပြောသည်။ "ဟိုးအရင်တုန်းက နာဆာက ၂၀၁၂ မှာ လျှပ်စစ်မုန်းတိုင်ဖြစ်မယ်လို့တော့ ခန့်မှန်းဖူးတယ်။ အဲလိုဖြစ်ရင် လျှပ်စစ်အပူလှိုင်းတွေကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေထိခိုက်မယ်လို့တော့ပြောတယ်။
ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး ကိုရီးယားပုံစံ စံပြကျေးရွာများအား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှည်းကူးမြို့နယ် ဖောင်ကြီးအရှေ့ကျေးရွာ၌ သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနက ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံတကာပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (KOICA) အကူ အညီဖြင့် ကိုရီးယားကျေး ရွာသစ်ပုံစံ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှု လျှော့ချရေး အကောင် ထည်ဖော်ဆောင် ရွက်နေမှု များ ကို သမ္မတ ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်နိုင်သိန်းသည် စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်က သွား ရောက်ကြည့်ရှု အားပေးရာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Kim Hae - Yong ၊ ကျွမ်းကျင် သူ Mr. SONG , Jung Geun ၊ သမဝါယမ သင်တန်းကျောင်း ဒုတိယ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးသောင်းနိုင်နှင့် ကိုရီးယားသို့သွား ရောက်လေ့လာခဲ့သည့် ကျေးရွာအစု အဖွဲ့ခေါင်း ဆောင် ဦးကြည်ဝင်းနိုင်တို့က ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဝင်ငွေတိုးရေး စီစဉ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတို့ကို ရှင်းလင်းတင် ပြကြသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာ အတွင်း လမ်းများ ပြုပြင်ထားရှိမှုနှင့် စုပေါင်းခန်း မဆောက်လုပ်မည့် မြေနေရာတို့ကို သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ သည်။
အရင်းအနှီးလိုအပ်သော မွေးမြူသူများအတွက် သက်သာသည့် အတိုးနှုန်းဖြင့် ချေးငွေရရှိရေးဆောင် ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိ
သားငါးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဓိကလိုအပ်ချက်များမှာအရင်းအနှီး၊ နည်း ပညာနှင့် ဈေးကွက် ဖော်ဆောင်ရေး ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီခွဲတွင် ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နယ် လှာကဒေါင် ကျေးရွာရှိ မွေးမြူရေးဇုန်၌ တာဝန်ရှိသူ များအား မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်က ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကိုရီးယား သမ္မတ နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးသွားရောက်မည်
Posted by drmyochit Thursday, October 04, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံသမ္မတ မစ္စတာ အီမြောင်ဘတ်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံသို့ မကြာမီကာလ အတွင်း တရားဝင် ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက် မည်ဖြစ်သည်။
Posted by drmyochit Thursday, October 04, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ Ramu နဲ့ Cox’s Bazaar ဒေသတွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက် မီးရှို့တိုက်ခိုက် မှုတွေ ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရအနေနဲ့ အချိန်မီအကာကွယ်မပေးနိုင် တဲ့အပေါ် ဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တရားရုံးချုပ်က အမိန့်ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
နေပြည်တော်တွင် ရဲနှင့် အနှိပ်ခန်းပေါင်းပြီး အမှုဖုံးကွယ်
Posted by drmyochit Thursday, October 04, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ |4comments
နေပြည်တော်မှာ ဝင်ငွေကာင်းတဲ့ အလုပ်ရမယ်လို့ လှည့်ဖြားခံရပြီး သားမယား ပြုကျင့်ခံရတဲ့ အမျိူး သမီး ငယ်ဟာနေပြည်တော်ရဲဆီမှာ အကူအညီ တောင်းပေမယ့် လျစ်လျူရှုခံရတဲ့အပြင် ကျူးလွန်သူတွေဘက် ရဲကရပ်တည် တယ်လို့ပြောပါတယ်။ လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန် ၁ ဧရိယာမှာ အသက် ၆၀ အရွယ် မျက်စိ တဖက် ပျက်နေတဲ့ မိခင်မုဆိုးမနဲ့ အတူနေထိုင်ရင်း ရှာဖွေကျွးမွေးနေတဲ့ ၂၂ နှစ်အရွယ် စက်ရုံအလုပ်သမ ဒီအမျိူးသမီး ငယ်ဟာ နေပြည်တော်က အလှပြင်ဆိုင်မှာ ဝင်ငွေကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ လူပွဲစားရဲ့ ပြောစကား ကိုယုံပြီး လိုက်သွား ရာက သားမယားအဖြစ် အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ ကာယကံရှင်က ပြောပါတယ်။
အိမ်ဖြူတော်၏ ကွန်ပျူတာစနစ်များ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခံရ
သမ္မတ အိမ်ဖြူတော် အတွင်း၌ ရှိသည့် ကွန်ပျူတာ စနစ်များသည် ဟက်ကာများ၏ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက် ခဲ့ခြင်းကို ခံခဲ့ရသော်လည်း ယင်းတိုက်ခိုက် မှုကို တားဆီးနိုင်ခဲ့သည့် အပြင် လုံခြုံရေး အဆင့် သတ်မှတ် ထား သည့် ကွန်ရက်များမှာ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ ရခြင်း မရှိကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ် ဆရာ ဆရာမများ၊ ပန်းချီဆရာများ၊ အနုပညာရှင်များ အပါအ၀င် လူပေါင်း ၅၀၀ ခန့်က ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ရှိ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အပေါ် တိုက်ခိုက်မူကို ယမန်နေ့က ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဒက္ကားတွင် ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်နေကြစဉ် ဒက္ကားမြို့ အမျိုးသား ပြတိုက်ရှေ့တွင် ယမန်နေ့က ညနေ ၄ နာရီက စတင်ပြု လုပ်သော အခမ်းအ နားတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်သူများက ဆိုင်းဘုတ်များကို ကိုင်ဆောင်၍၎င်း၊ အသံချဲ့စက်မှ တဆင့် ခေါင်းဆောင်များက မိန့် ခွန်း ပြောကြား၍၎င်း ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ “ အခု လက်ရှိ ကော့စ်ဘဇား ခရိုင်ရာမူးနဲ့ တခြားနေရာတွေမှာ ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်း ၂၂ ကျောင်း မီးရှို့ခံခဲ့ရပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် သတ်မှတ်သော ပုံစံသစ်ပြောင်းရန် စီစဉ်
လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေသော တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲရမှတ်ကို အခြေခံဆုံးဖြတ်သည့် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အစား သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များက သတ်မှတ်ထားသည့် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုရသည့် စ နစ်ကို ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီးကို လေကြောင်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ဆုံရပ်အဖြစ် တည်ဆောက် မည်
မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီးကို ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြား လေကြောင်း ကုန်စည်စီးဆင်းရာ အဓိကကျသော လေဆိပ်နှင့် လေကြောင်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ဆုံရပ်တစ်ခုအဖြစ် ပုဂ္ဂလိကနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရပ်ဆိုင်းထားသည့် မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းထက်ကြီးသော ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတစ်ခုကို သံ လွင်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်က ပြောသည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းသည် ရှမ်းပြည် နယ် အရှေ့ပိုင်း မိုင်းတုံမြို့နယ် တာဆန်းတွင် တည်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၇၁၀၀ ထုတ်ယူနိုင်မည်ဟု သိရ သည်။
ဆူဇူကီးဖလား ခြေစစ်ပွဲ အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နေ့စတင်မည်
မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည့် အာဆီယံဆူဇူကီး ဖလားခြေစစ်ပွဲကို အောက်တိုဘာ ၅ ရက်မှစတင်၍ ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏ အားကစားပြိုင်ဝင်းတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲသို့ အိမ်ရှင်မြန်မာ အသင်းနှင့် အတူ လာအို၊ အရှေ့ တီမော၊ ဘရူနိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားအသင်းတို့ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ရာ အောက်တိုဘာ ၅ ရက် ညနေ ၃ နာရီတွင် ကမ္ဘောဒီး ယားနှင့် အရှေ့တီမော၊ ညနေ ၆ နာရီတွင် မြန်မာနှင့် ဘရူနိုင်း အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင် ကစားကြမည်ဖြစ်သည်။
"စစ်နှင့်ပဋိပက္ခဒေသရှိ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးများ၏ ပညာရေးအခြေအနေ စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိနေ"
ပဋိပက္ခအပါအဝင် စစ်မက်ဖြစ်ပွားမှုရှိနေသော နေရာတို့ရှိ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးတို့၏ လက်ရှိ အခြေအနေများအပေါ် စိတ်ပူစ ရာ အနေအထား ရှိနေသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှ ပညာရေးကျွမ်းကျင်သူ ဦးဝင်းအောင် က ထုတ် ဖော်ပြောသည်။
တရားမဝင် နိုင်ငံသားစိမ့်ဝင်မှု ကာကွယ်ရန် ရခိုင်အနောက်ဘက် ကမ်းခြေတစ်လျှောက် ကမ်းခြေစောင့်တပ်များ ချထားရန် စီစဉ်ပြီးဖြစ်
နိုင်ငံတွင်း တရားမဝင်နိုင်ငံသားစိမ့်ဝင်မှုတွေ ကာကွယ်နိုင်ရန် ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက် ကမ်းခြေတစ်လျှောက် ကမ်းခြေ စောင့်တပ်များ ချထားရန် စီစဉ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးက ပြောသည်။ ချထားရန် ကမ်းခြေစောင့် တပ်များ ထူထောင်ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ် သလို ဖွဲ့စည်းပုံလည်း ကျထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတွင်းတရားမဝင် ဝင်ရောက်မှုတွေအတွက် ထိထိ ရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်သွားရန် စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ¤င်း က ဆိုသည်။ ''အစိုးရဘက်ကတော့ တတ် နိုင်သလောက် စနစ်တကျတစ် ဖက် နိုင်ငံ ကစိမ့်ဝင်တဲ့ကိစ္စတွေကို မဖြစ် အောင် ထိထိ ရောက်ရောက်လုပ်ဖို့ စနေပါပြီ''ဟု ပြောကြားသည်။ ၄င်းအပြင် လာမည့် တစ်နိုင်ငံ လုံးသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှု တွင် ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေ အရ တိတိကျကျ ဆောင်ရွက်ရှင်း လင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ဆိုသည်။
ကချင်တိုင်းရင်းသား MIXED MARTIAL ARTS FIGHTER "AUNG LA N SANG" ၏ ပွဲစဉ်တစ်ခုကို အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့ ၂၀၁၂ တွင် ပြုလုပ်မည် ။
Aung La N Sang အနေဖြင့် ရရှိသော ၀င်ငွေအားလုံးကို ကချင်ပြည်ရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ အတွက် လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် United States အတွင်းရှိ စစ်ပွဲဆန့်ကျင်သူ စစ်ပွဲမလိုလားသူများအားလုံး မိမိစေတနာ တတ်စွမ်းသ၍ကူညီပံ့ပိုးကြ ပါရန် တိုင်းရင်း သား ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အားလုံးသို့ အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုက်သည် ။
မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးများကိုတရုတ် နိုင်ငံသားများနှင့် အဓမ္မ ထိမ်းမြားရန် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လူကုန်ကူးရန် ဗြောင်ကျစွာ စည်းရုံး လာကြောင်း လူကုန်ကူးမှု တားဆီး နှိမ်နင်းရေး အဖွဲ့မှ ဒုတိယ ရဲမှူးကြီး ညွန့်လှိုင်က ပြောကြားသည်။
လူကုန်ကူးခံရသူများ၏ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၃၅ နှစ်ကြား အမျိုးသမီးများဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ အဓမ္မလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ၈၉ မှုဖြင့် အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း လူကုန်ကူးမှု ၁၃၆ မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူကုန်ကူးခံရသူများ၏ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အသက် ၁၂ နှစ်မှ အသက် ၃၅ နှစ်ကြား အမျိုးသမီးများဖြစ် ကြောင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ အဓမ္မလက် ထပ်ထိမ်းမြားစေမှု ၈၉ မှုဖြင့် အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း လူကုန်ကူးမှု တားဆီး ကာကွယ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့မှ သိရပါသည်။
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး ကာဘော်လစ်ဆီသောက် သေဆုံး
သံလျင် မြို့နယ် ဖားကူး ကျေးရွာတွင်အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး ကာဘွန်လစ်ဆီ သောက်၍ သေဆုံးခဲ့သော ဖြစ်စဉ်တစ်ခု အောက်တိုဘာလ၁ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးထံမှ စုံစမ်းသိရှိရ သည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အင်းလျား လိပ်ဟိုတယ်ဝင်းအတွင်းရှိ ဒီဂျေဘားတွင် ယမန်နေ့ည သန်းခေါင် အချိန်မှာလူငယ်များ အချင်းများရာမှကားဖြင့်တိုက်သည့်အတွက် မောင်ဝေအောင်အမည်ရှိ ဆေးတက္ကသိုလ်နောက် ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားမှာ ရန်ကုန်ပြည် သူ့ ဆေးရုံးကြီးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်ကုသဆောင်တွင် ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်ကာလတွေ အတွင်း ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ကို ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် လာခဲ့ကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ အတွက်စေတနာရှင်တွေ စုပေါင်းလှူဒါန်းထားတဲ့ ဆန်အိတ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ခြင်း မရှိတဲ့ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ကာဒီကျေးရွာကို ပေးအပ်ဖို့ စီစဉ်နေတဲ့အတွက် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ခံ လူထုတစ်ရပ်လုံးက မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by drmyochit Thursday, October 04, 2012, under ဆောင်းပါး | No comments
'ပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ ဆယ်စုနှစ်ချီတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်တွေဟာ နိုင်ငံရေးပြဿနာလို့ပဲ ပြောလို့ရတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ ကိစ္စဟာ လည်း နိုင်ငံရေးပြဿနာပါ'
KIA ရဲ့… အကြံကုန်ဂဠုန်ဆားချက်၊ စစ်နည်းဗျူဟာအသစ်စက်စက်အကြောင်း
တစ်နည်းမဟန်လို့ တစ်နည်းကြံတဲ့ KIA ရဲ့ ဉာဏ်နီ ဉာဏ်နက်တွေကို ခင်ဗျားတို့သိအောင် နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကချင် တစ်ယောက်ပါ။ KIA ထဲမှာနှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့သား အရင်းခေါက်ခေါက်က KIA က ဗိုလ်ကြီး ဇော် တန်၊ တူတစ်ယောက်က ဗိုလ်လဆိုင်း၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ လ၊ ၆ လအတွင်း သူတို့နှစ်ယောက် ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ ကျဆုံး သွားခဲ့ကြတယ်။
ချီဖွေငယ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ပြီးသော်လည်း တိုက်ပွဲများကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ယူသုံးစွဲခွင့် မရသေး
တရုတ်နိုင်ငံပိုင် CPI ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်သည့် ချီဖွေငယ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းမှာ တည် ဆောက်မှု ပြီးစီးသွားပြီ ဖြစ်သော်လည်း နယ်မြေဒေသ မတည်ငြိမ် မှုကြောင့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ထုတ်ယူ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း မရှိသေးဟု CPI ကုမ္ပဏီမှ ဒုဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ကော့ကိမ်းလျှောင် က ပြောသည်။
From : နေလင်းအောင်
ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူတစ်ဦးဟာ ပြည်နယ်တစ်ခုမှဆင်းရဲချိူ့ တဲ့ နေကြသည့်မိသားစုများနေ ထိုင်နိုင်ရန်အိမ်များ ဆောက်လုပ်ပေးမည့် ပရဟိတရန်ပုံငွေတစ်ရပ် ထူထောင်နိုင်ရန်အတွက် သူမရဲ့ အပျိူစင်ညကို လေလံတင်ရောင်းချ လျှက် ရှိနေပါတယ်။ အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ ကာတာရီနာ မစ်ဂလီယီုရီနီ ဟာယခု ဈေးပြိုင်ခေါ်ဈေး ဒေါ်လာ ၁၅၅၀၀အ ထိရောက်နေ ပြီဖြစ်သည့် ထိုလေလံပွဲမှရသည့် ငွေအားလုံးအား ဘရာဇီးနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းမှသူမနေထိုင်ရာ ဆန်တာကာ တာရီနာ ပြည်နယ်တွင်အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့ အစည်း မှတာဝန်ယူလှူဒါန်းဆေက်လုပ်မည့် ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသား များအတွက် (တန်ဖိုးနည်း )ခေတ်မှီအိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက်လှူဒါန်းပေး အပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်နီမော်ရွာမီးရှို့ရန်ကြိုးပမ်းသူ ဘင်္ဂလီသုံးဦး ဖမ်းဆီးရမိ
အောက်တိုဘာ (၁)ရက်နေ့ ည(၁၁း၃၀)တွင် ကျောက်နီမော်ကျေးရွာအားမီးရှို့ရန် အနီးရှိကျောက်ထရံရွာမှ ဘင်္ဂလီများ ကြိုးပမ်းရာတွင် ယင်းဒေသ၌ တပ်စွဲစောင့်ကြပ်နေသော ခမရ(၃၆၂)မှ အချိန်မီ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး ဦးဆောင်သူ ဘင်္ဂလီ သုံးဦးကို ဓာတ်ဆီပုံးများနှင့်တကွ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာ့အပြောင်းအလဲ အမေရိကန်တွင် မှတ်ကျောက်တင်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၏ အမေရိကန်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ဖြစ်ထွန်းခဲ့ကြောင်း နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များကပြောသည်။
"လူမျိုးရေးမှ ဘာသာရေး သို့ဖန်တီး လာခြင်းများ ဖြစ်လာပြီးနောက်"
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဒဘာသာဘုန်း တော်ကြီးကျောင်းများမီးရို့ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း ၊ ဦးဇင်းများ သတ်ဖြတ်ခံရ ခြင်းတို့ကိုမြင်ရ သည်။ အယ်လ်ဇီးယားသတင်း ဋ္ဌာနမှာ ရုပ်သံလွှင့် တင်ပြသွားသည်ကို ကြည့်ရသည် ။၄င်းသ တင်းတင်ပြပုံတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ ၌ ဖြစ်ပျက်နေသောမြင်ကွင်းတချို့ ကို ပြသသွားသည်ကိုလည်းတွေ့ ရသည် ။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် အက်စတိုးနီး...
1Gbps အမြန်နှုန်းနဲ့ ဒေတာပို့လွှတ်နိုင်မည့် လေဆာရောင...
Blink Hacker Group မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ၀က်ဘ်...
ဗလီဆိုတာ ရန်သူဘာသာခြားနိုင်ငံတစ်ခုကို သိမ်းပိုက်ဖိ...
အရင်းအနှီးလိုအပ်သော မွေးမြူသူများအတွက် သက်သာသည့် အ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကိုရီးယား သမ္မတ နိုင်င...
နေပြည်တော်တွင် ရဲနှင့် အနှိပ်ခန်းပေါင်းပြီး အမှုဖုံ...
မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီးကို လေကြောင်းထောက...
"စစ်နှင့်ပဋိပက္ခဒေသရှိ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးများ၏ ပညာ...
တရားမဝင် နိုင်ငံသားစိမ့်ဝင်မှု ကာကွယ်ရန် ရခိုင်အနော...
ကချင်တိုင်းရင်းသား MIXED MARTIAL ARTS FIGHTER "AUN...
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး ကာဘော်လစ်ဆီေ...
KIA ရဲ့… အကြံကုန်ဂဠုန်ဆားချက်၊ စစ်နည်းဗျူဟာအသစ်စက်...
ချီဖွေငယ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ပြီးသော်လည်း တို...
ကျောက်နီမော်ရွာမီးရှို့ရန်ကြိုးပမ်းသူ ဘင်္ဂလီသုံးဦး ဖ...
"လူမျိုးရေးမှ ဘာသာရေး သို့ဖန်တီး လာခြင်းများ ဖြစ...